Tengesa yakaderera mutengo, yakakwirira mhando electromotor ine yepasirese-Sogears
mutengo wakadzika, wemhando yepamusoro electromotor neepasirese
Mhando dzakasiyana-siyana dzesarudzo dze electromotor
Mhando yepamusoro electromotor kutumira kwepasirese
Isu tinopa zvigadzirwa zve electromotor. Tsvaga ruzivo nezve Electromotor.Buy mutengo wakaderera, wemhando yepamusoro electromotor. Iyo electromotor yakatanga kumhanyisa pasi pemamiriro ezvinhu akajairika. Kuita kwedu mota kwakagadzikana, torque yakakura, kurira kushoma, uye kupisa kupisa kwakanaka.Mota inotengeswa kumba nekune dzimwe nyika, iine zvigadzirwa zvakazara uye mhando yekusimbiswa.
Isu tinosimudzira yepamusoro zvigadzirwa zveElectromotor mumutengo wepamusoro kubva kuChinese Magetsi Magetsi akagadziriswa, Mota ye rotor electromotor uye tinokwanisa kutumira iwo mamodeli kana tichida hunyanzvi kudhirowa. Nyanzvi yekugadzira engineering yemagetsi kambani, kubva kudiki kusvika kuHombe Electromotor, zvakare electromotor inotyaira uye kutonga, yakakwana technical solution yekushandira indasitiri madhizaini, Rail Vehicles, Oiri uye Gasi, Mining, Cement, Power Generation, Turbo, Hydro Power, Wind uye Tidal Energy. Rubber uye Plastics, Metallurgy, Shuwa, Marine uye, Kuvaka Ngarava, Kudzokorora uye Kugadzirisa Zvirimwa, Mishini Zvishandiso. Zvese Essence zveUinjiniya.
Isu tinopa yepamusoro, zvigadzirwa zvemutengo wakaderera
AC Electromotors,, Clutch brake Electromotors, Pole ichichinja Electromotors, High voltage Electromotors, Kuputika chiratidzo Electromotors, Matanho matatu squirrel cage induction electromotors, Marine design electromotors, axis yakakwira kubva pa112 mm kusvika ku560 mm, ine torque inosvika 20 000 Nm. Imwe-chikamu squirrel cage, huwandu hwekuita: 40 W - 500 kW, zvakaburitswa marangi: IMB 14, IMB 5. yakakwira kushanda.
Motors edu anoshandiswa munzvimbo dzakasiyana siyana dzekushandisa senge maindasitiri, zvekurima, machira, zvishandiso zvidiki, otomatiki, machira ekuwachira, magetsi emuchadenga, nezvimwewo Kuparadzanisa zvikamu zvemagetsi uye kudzokororazve, kuburitswa kwemhangura kudzokororazve.
Zvimwe Zvezvigadzirwa zvedu
Electromotors maitiro nemagetsi mabhokisi anotyaira
Kana iwe uine chero mibvunzo, iwe unogona kutibata nesu, tichafara kukubatsira!
NER Boka rakasarudzika kwemakore mazhinji mukugadzirwa kwemotor kune iro basa chairo rinodaidzwa nemapurojekiti mazhinji. Yepakati bhizinesi redu riri kupa marudzi ese eElectromotors emakambani emakambani. Vimba nesu kuti uve yako Electromotors SUPPLIER. Pamwe chete, tichaita chaizvo izvo zvinonyanya kukosha.
Kune akawanda mota dzakasiyana pano. Yakadzika-inomhanya zvachose magineti inowirirana AC mota, AC yakagadzirirwa motokari, zvichingodaro. Iyo yekunze casing inogadzirwa neakakwira-simba chiwanikwa kufa-kukanda. Iyo flange uye yekunze casing zvakagadzirwa ne otomatiki CNC muchina chishandiso kuvandudza iwo chaiwo uye kukanganisa mutoro. Iko kukwesana kudiki, iko kukwesana kunogadzira tembiricha yakaderera uye hupenyu hwebasa hunovandudzwa.
Kana iwe uine zvigadzirwa zvako zvaunofarira, uya ubatane nesu! Isu takagadzirira uye tinotarisira kubatana kwedu. Isu tinotora mhando sekushandisa kwedu uye mutengo wakaderera ndiko kutendeseka.
Bvunza isu Chaunoda